Lisekhona ithemba ngesicoco seligi koweChiefs - Impempe
Lisekhona ithemba ngesicoco seligi koweChiefs
December 21, 2021 December 21, 2021 Impempe.com
USiphosakhe Ntiya-Ntiya, weKaizer Chiefs, ubona kungakapheli ngesicoco seDStv Premiership yize iMamelodi Sundowns ivule igebe lamaphuzu angu-16 esicongweni.
AmaBrazilians, okuyiwona avikela isicoco seligi, ashaywe okokuqala AmaZulu ngo 1-0 ngoMsombuluko eKings Park Stadium, eThekwini. Lokhu akwenzi umehluko otheni ngoba iSundowns isanqenqeleza phambili ngamaphuzu angu-43.
Ilandelwa yi-Orlando Pirates naMaZulu abanamaphuzu angu-27 ngamunye emidlalweni engu-18. IChiefs isendaweni yesithupha ngamaphuzu angu-25 emidlalweni engu-15.
“Njengamanje iSundowns ihamba phambili ngamaphuzu amaningi kakhulu. Kodwa nathi ngesizini ephambi kwedlule sasisesimeni esifanayo kodwa salahlekelwa isicoco ekugcineni ngephuzu elilodwa,” kusho uNtiya-Ntiya.
“Kusengenzeka noma yini inqobo nje uma senza umsebenzi wethu, siqoqa amaphuzu aphelele emdlalweni ngamunye. Ngiyakholwa ukuthi kusengenzeka noma yini.”
Kuzoba nzima nokho kwiChiefs ukuthi ishise umbango wesicoco seligi ngoba kunemidlalo emibili engayidlalanga engase iphucwe amaphuzu ayo ingangenanga ngisho enkundleni.
IChiefs ayizange idlale neCape Town City neLamontville Golden Arrows ngenxa yokudlanga kweCoronavirus eNaturena. Imizamo yayo yokuthi kuhlehliswe imidlalo yangoDisemba ikhahlelwe ngazo zombili yiPremier Soccer League (PSL).
NgoMsombuluko iPSL ikhiphe isitatimende igcizelela ukuthi ayigudluki esinqumeni sayo sokuthi imidlalo yeChiefs ngeke ihlehliswe. Kuzocaca ngoJanuwari 5 ngokuzokwenzeka ngemidlalo emibili iChiefs engayidlalanga.
Amakhosi azobheka ukuwuvala ngenothi eliphezulu unyaka uma esebhekene neMaritzburg United koweligi eFNB Stadium, eNasrec, ngoLwesithathu, ngo-7.30 ebusuku.
“Ngicabanga ukuthi kubalulekile kithina ukuthi sibeke umoya phansi. Asiwutholanga umphumela ebesiwufuna emdlalweni odlule ngakho siphoxekile kakhulu,” kusho uNtiya-Ntiya.
“Nokho ekugcineni siyazi ukuthi asizange sidlale kabi kakhulu, ngakho sizozama ukwenza kangcono kunomdlalo odlule.”
IChiefs igcine ishaywe yiRoyal AM ngo 1-0 ngeSonto ngakho izozama ukubuyisa ukuzethemba kwayo ngoLwesithathu.
Previous Previous post: UMalesela ucasulwa amaphutha eqenjini lakhe
Next Next post: AmaProteas agilekile kuhoxa uNortje